को हो तुलसी ? – Karnalisandesh
को हो तुलसी ?
प्रकाशित मितिः २२ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १५:४२ November 8, 2019
काठमाडौँ। तुलसी अर्थात वृक्ष पूर्व जन्ममा वृन्दा नाम गरेकी एक सुन्दर महिला थिइन्। उनको जन्म राक्षस कुलमा भएको थियो।बच्चादेखि नै उनी भगवान् श्री विष्णुको भक्त थिइन्। उनी भगवान् विष्णुको सधैं प्रेमले सेवा र पूजाआजा गर्थिन्।
जब उनी ठूली भइन् उनको विवाह राक्षस कुलको दानव राज जलन्धरसँग भयो। जलंधर समुन्द्रबाट उत्पन्न भएको थियो। वृन्दा एक पतिव्रता स्त्री थिईन्। उनी सधैं आफ्नो पतिको सेवा गर्थिन् र त्यसैलाई उनी आफ्नो धर्म मान्थिन्।
एक दिन देवता र दानवहरूबीच युद्घ चल्यो। जब जलन्धर पनि त्यस युद्घमा जान लागेका थिए, तब उनकी श्रीमती वृन्दाले भनिन्,‘स्वामी तपार्इं युद्घमा जान लाग्नु भएको छ, त्यसैले जबसम्म तपाईं युद्घमा रहनु हुनेछ तबसम्म म तपाईंको जितको लागि भगवान विष्णुको व्रत बसी पुजा अनुष्ठान गरीरहनेछु। र जबसम्म तपाईं युद्घबाट फर्केर आउनुहुन्न तबसम्म म आफ्नो संकल्प पनि छोड्दिन।’
जलन्धर युद्घमा गए र वृन्दा पनि आफ्नो व्रतको संकल्प राखी पूजामा बसिन् । उनकै व्रतको प्रभावले गर्दा देवता पनि जलन्धरलाई जित्न सकेन। सबै देवताहरू हार्दै गएपछि देवताहरू भगवान् विष्णुकोमा गएर हारगुहार गरे। त्यसपछि भगवान् श्री विष्णुले भने वृन्दा मेरो परम भक्त हुन् म उनलाई छल गर्न सक्तिनँ।
त्यसपछि देवताहरू बोले भगवान् दोस्रो कुनै उपाय पनि छैन, अब तपाई नै हाम्रो मदत गर्न सक्नुहुन्छ। तत्पश्चात् युद्घ शान्तका लागि भगवान् विष्णुले जलन्धरको रूप लिएर वृन्दा भएको ठाउँमा पुगिन्। जब भगवानलाई जलन्धरको रूपमा आफ्नो पतिलाई देखिन् उनी तुरून्तै पूजापाठबाट उठेर आफ्ना पतिको चरण छोए र उनको संकल्प टुट्यो।
यसरी उनको संकल्प टुट्ने बित्तिकै देवताहरूले जलन्धरलाई युद्घ भूमिमा मारिदिए र उनको शिर वृन्दाकै महल अगाडि गिर्यो। जब वृन्दाले आफ्नो पतिको काटिएको शिर देखिन् तब भनिन् कि यो काटिएको शिर मेरो पतिको हो भने जो मेरो सामु उभिएको छ त्यो को हो ? उनले सोधिन्, तत्पश्चात् भगवान श्री विष्णु आफ्नो स्वरूपमा आए र केही बोलेनन्। वृन्दा यि सब कुरा देखेर सबै कुरा बुझिन् र क्रुर भएर उनले भगवान्लाई तपाईले मलाई छल गर्नु भयो तपाइ पत्थर भएर जाओस् भनेर श्राप दिइन् र भगवान् तुरुन्तै पत्थर बने।
त्यसपछि जताततै हाहाकार मच्चियो र माता लक्ष्मी पनि भगवान् विष्णुको वियोगमा रून थालिन्। यो सब देखेर वृन्दाको मनमा दया जाग्यो। उनले भगवान् विष्णुलाई आफ्नो श्रापबाट मुक्त गराई दिइन् र आफ्नो पतिको शिर लिई उनी सती गईन् ।
त्यसको धुवांबाट एक वृक्ष उत्पन्न भयो। त्यस वृक्षलाई देखेर भगवान श्री विष्णुले भने कि यस वृक्षको नाम तुलसी हो र मेरो एक रूप यसको पत्थरको रुपमा रहनेछ जसलाई शालिग्रामको नामले चिनिनेछ, यसलाई तुलसीसँगै पूजा गरीनेछ र म विना तुलसीको भोग स्वीकार गर्दिन। तबदेखि नै तुलसीको पूजा सबैले गर्न थालिए र तुलसीको विवाह शालिग्रामसंग कार्तिक महिनामा गर्न थालियो। जसलाई एकादशी भनिन्छ र एकादशीको दिनलाई नै तुलसी विवाहको रुपमा मनाउन थालियो।